AMISOM oo sheegtay inay dishay xubno Al-Shabaab ah, saanado hubna ka qabsatay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AMISOM oo sheegtay inay dishay xubno Al-Shabaab ah, saanado hubna ka qabsatay
AMISOM oo sheegtay inay dishay xubno Al-Shabaab ah, saanado hubna ka qabsatay
J/Hoose (Halqaran.com) – Taliska ciidamada Midowga Afrika Amisom, ayaa sheegay inay dagaal ku dileen xubno ka tirsanaa Shabaab, kadib dagaal ka dhacay deegaanka Bilis qooqaani ee Gobolka jubbada hoose.
Wararka ayaa sheegaya, in dagaalkan ay soo qaadeen Jimcihii Ciidamo ka tirsanaa Ciidanka Shabaab, waxaana ay ku soo qaadeen Saldhiga Ciidamada Jubbaland ee deegaanka Bilis qooqaani, balse waxaa dagaalkaasi ka hortagay Amisom sida qoraal taliskooda ka soo baxay lagu sheegay.
Amisom waxa ay sheegeen inay dileen xubno Al-Shabaab ah, sidoo kalena ay ka qaateen saanad Militari oo rasaas & qoryo Ak47 isugu jira.
“Qeybta Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (Amisom) oo ku sugan magaalada Bilis Qooqani ayaa jimcihii joojiyay weerar lagu qaadayay Ciidamada Amniga Jubaland (JSF), kaas oo lagu diley laguna qabtey dhowr argaggixiso ah, Ciidamada Amisom ayaa gacanta ku dhigay dhowr qori oo AK 47 ah iyo rasaas fara badan oo ay ka heleen xubno ka tirsan Al Shabaab oo la go’doomiyey intii lagu guda jiray weerarka”, ayaa lagu yiri Warka ka soo baxay Midowga Afrika.
Dhinaca kale, Ururka Al-Shabaab ayaa dagaalkaasi waxa ay ka sheegteen guulo inay ka gaareen, kadib weerarka ay la beegsadeen xerada Ciidamada Jubbaland ee deegaankaasi ay ku leeyihiin.
Ururka Al-Shabaab ayaa weeraro abaabulan waxa ay ku qaadaan xeryaha Ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanno ka tirsan Gobolada Jubbooyinka.